नयाँ कम्पनीहरुमा यसकारण लगातार सर्किट लाग्न सकेन - DURBAR TIMES
HomeEconomyनयाँ कम्पनीहरुमा यसकारण लगातार सर्किट लाग्न सकेन
नयाँ कम्पनीहरुमा यसकारण लगातार सर्किट लाग्न सकेन
भर्खरै नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा ३ वटा कम्पनीहरु सूचीकृत भएर कारोबार सुरु भएको छ । जीवन विकास लघुवित्त, युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स र मनकामना स्मार्ट लघुवित्तको शेयर केही समयअघि मात्र नेप्सैमा सूचीकृत भएका हुन् ।
थोरै कित्ता आइपिओ, राम्रो इपिएस भ्यालु र गज्जबको प्रति शेयर आम्दानी भएका कम्पनीहरुको आइपिओ हात पारेका लगानीकर्ताहरु थोरै समयमा नै धेरै प्रतिफल पाइन्छ भनेर खुसी मनाइरहेको पाउन सकिन्छ । केही समयअगाडी महिला लघुवित्तको आइपिओ हात पारेका लगानीकर्ताहरुले पाएको प्रतिफल हेर्दै बसेका लगानीकर्ताहरु अहिले जीवन विकास लघुवित्तमा पनि उस्तै आशा गरेर बसेको सामाजिक सञ्जालहरुमा पाइने प्रतिक्रयाबाट थाहा पाउन सकिन्छ ।
तर कारोबार भएको केहि दिन भइसक्दा पनि हालसम्म जीवन विकास लघुवित्तको शेयरमूल्य एक दिन मात्र सर्किट लेबलमा बढेको छ । अन्य दिन भने ४ देखि ६ प्रतिशतसम्म बढेको छ ।
हिजोबाट कारोबार सुरु भएको युनियन लाइफ इन्स्योरेन्सको पनि त्यस्तै सामान्य बृद्धि भएको थियो भने मनकामना स्मार्ट लघुवित्तको त कारोबार नै सुरु हुन सकेन । आखिर किन यस्तो भयो त ?
प्रायजसो लघुवित्तहरुको पुँजी सानो आकारको हुने र त्यसको अनुपातमा आइपिओ पनि सानै संख्यामा आउने हुनाले लगानीकर्ताहरुलाई आइपिओ हात पार्न मुस्किल बन्दै गएको छ । ३१ लाखभन्दा बढी संख्यामा खुलेका डिम्याट अकाउन्टबाट झण्डै २२ लाख हाराहारीमा आइपिओमा आवेदनहरु परिरहेका छन् । यसरी हेर्दा लघुवित्तको आइपिओ हात पार्ने व्यक्तिले सुनकै अण्डा पाए बराबर खुसी मनाउनु पर्ने अवस्था रहेको छ ।
दोस्रो कुरा लघुवित्तहरुले वार्षिक प्रगति विवरणमा मनग्ये नाफा कमाएको विवरणहरु प्रस्तुत गर्छन् । यसबाट लगानीकर्ताहरु समग्र लघुवित्ततर्फ नै आकर्षित पनि भइरहेका छन् । यति हुँदा पनि किन ढिला मूल्यबृद्धि भइरहेको छ ?
हाल बजारमा देखिएको एउटै कारण हो मागको अनुपातमा शुन्य आपूर्ति । एक कारोबारमा बढीमा २ प्रतिशत मूल्य घटबढ गराएर कारोबार गर्न पाइ्न्छ । तर हिजो स्पेशल प्र ओपन सेसनमा मनकामना स्मार्ट लघुवित्तको त एउटा पनि कारोबार मेल खाएन र कुनै पनि कारोबार नै हुन पाएन । बेच्न चाहने र किन्न चाहने लगानीकर्ताको मूल्यमा समानता भएमात्र कारोबार सफल हुन्छ ।
त्यस्तै जीवन विकास लघुवित्तको पनि झण्डै १५ लाख कित्ताको माग हुँदा बेच्न चाहने लगानीकर्ताको संख्या भने शून्य थियो । अत्यधिक कम संख्यामा कारोबार भएकाले यसको मूल्य पनि सामान्य भन्दा तलमाथि गर्न सकेन ।
बजारलाई चलायमान गराउन माग र आपूर्तिबिच तादात्म्यता अवश्य हुनुपर्छ । नयाँ कम्पनीहरुको शेयरमा त्यो तादात्म्यता नदेखिएकाले साधारण रुपमा बजार अघि बढ्न सकेन ।
Previous articleपशुपालन गर्नेलाई सहुलियत कर्जा दिन सम्झौता
Next articleमैलुङ हाइड्रोको आईपिओ भर्ने समय थप, यस कारण भर्न मिलेको थिएन आईपिओ
#jeevan bikash laghubitta
#Manakamana smart laghubitta
#Union life insurance
जीवन विकास लघुवित्तको जरुरी सुचना
जीवन विकास लघुवित्तको शेयर मुल्य आज पनि ओरालो
न्यादी हाइड्रोपावरको आईपीओ आज बाँडफाँट हुँदै
आमा बनिन् प्रियंका कार्की, घरमा लक्ष्मीको आगमन
एमालेको अवरोधका बीच प्रतिनिधिसभाबाट आर्थिक विधेयक-२०७८ पारित
नेप्सेमा सामान्य वृद्धि हुँदा मनकामना स्मार्ट लघुवित्तको सेयर मूल्य बढेर सर्किट लेभलमा
महिला फुटबल टिम स्वदेश फिर्ता
आईपीएलमा आज मुम्बई र कोलकत्ता भिड्दै
मलेसियाले नेपालीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा
मोटरहेडको नयाँ माेटरसाइकल टेक्केन आर २५० नेपाली बजारमा, मूल्य ४ लाख ताेकियाे
‘गाँजावादी एक हौं’ भन्दै माईतीघरमा प्रदर्शन
हुन्डाइको दशैँ तिहार हेभी इक्वुपमेन्ट विशेष अफर
अवैध धनलाई प्रोत्साहन गर्दैनाैँ : अर्थ मन्त्रालय
मुम्बईलाई हराउँदै चेन्नाइ शीर्ष स्थानमा
२५ बैंकहरुको नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक, कुन बैंकको कति ?